“Jehovha Anodei Kwauri?” | Swedera Pedyo naMwari
“Jehovha Anodei Kwauri?”
JEHOVHA anotarisira kuti vanhu vanoda kumunamata nenzira yaanoda vaitei? Anotitarisira kuti tisatombotadza zvachose here? Kana zvakadaro, tinogona here kumufadza sezvo tiri vanhu vane chivi? Kana kuti anotarisira kuti tiite zvatinokwanisa here? Zvinokosha kuti tizive mhinduro dzemibvunzo iyi kana tichida kushumira Mwari tichifara. Ngatimboongorora kuti muprofita Mika akatsanangura sei muchidimbu zvinodiwa naMwari.—Verenga Mika 6:8.
“Iye akakuudza kuti zvakanaka ndezvipi.” Hatiiti zvokufungidzira kuti Mwari anoda kuti tiite sei. Anotitsanangurira zvakajeka muBhaibheri. Zvaanotitarisira kuita hazvitikuvadzi asi ‘zvakatinakira.’ “Mwari rudo” saka anoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. (1 Johani 4:8; 5:3) Kuteerera zvaanotiudza hakungomufadzi chete asiwo kunotibatsira.—Dheuteronomio 10:12, 13.
“Jehovha anodei kwauri?” Mwari ane kodzero yokutikumbira kuita chimwe chinhu here? Hongu! Tinofanira kumuteerera nokuti ndiye akatisika uye ndiye anoita kuti tirambe tichirarama. (Pisarema 36:9) Saka anoda chii kubva kwatiri? Mika anoshandisa zvirevo zvitatu kuti atsanangure muchidimbu zvinodiwa naMwari kwatiri. Zviviri zvacho zvinonyanya kutaura nezvokudyidzana kwedu nevamwe uye chechitatu chine chokuita noukama hwedu naMwari.
“Kuti ururamisire.” Rimwe duramanzwi rinoti shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti ‘kururamisira’ rinoreva “zvinosanganisira kugarisana nevamwe uye kuvabata zvakanaka.” Mwari anoda kuti tibate vamwe zvakanaka, zvinoenderana nemitemo yake. Tinoratidza kuti tinoruramisira kana tisingasaruri vamwe, tichivaitira zvakarurama uye tichiita zvinhu takatendeseka. (Revhitiko 19:15; Isaya 1:17; VaHebheru 13:18) Kana tikabata vamwe zvakanaka, vanganzwawo vachida kutibata zvakanaka.—Mateu 7:12.
‘Kuti ude mutsa.’ Mwari haangodi kuti tiratidze mutsa chete asiwo anoda kuti tiude. Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “mutsa” (che′sedh) rinogonawo kushandurwa richinzi “mutsa worudo” kana kuti “rudo rwakavimbika.” Imwe nyanzvi yeBhaibheri inoti: “Kushandura shoko rokuti [che′sedh] tichishandisa mashoko okuti rudo, ngoni kana kuti mutsa hazvina kukwana nokuti shoko racho rinoreva unhu hwacho hwose, kwete hwakazvimirira.” Kana tichida mutsa, tinouratidza nemwoyo wose uye tinofara kubatsira vanoshayiwa. Izvi zvinoita kuti tiwane mufaro unobva pakupa.—Mabasa 20:35.
“Uve nomwero pakufamba naMwari wako.” MuBhaibheri shoko rokuti “kufamba” rinoreva “kuramba uchiita chimwe chinhu.” Tinofamba naMwari patinoramba tichiita zvaanotiudza muBhaibheri. Tinofanira ‘kuva nomwero’ patinenge tichiita izvozvo. Nei zvakadaro? Kana tiine mwero pamberi paMwari, tichazvininipisa tobvuma kuti tiri vanhu vanotadza uye vane nzvimbo yepasi pasi kana tichizvienzanisa naye, uye tobvumawo kuti pane zvatisingakwanisi kuita. Saka, kuva “nomwero pakufamba” naMwari kunoreva kuziva zvaanoda uye zvatinokwanisa kuita.
Zvinofadza kuti Jehovha haambotitarisiri kuita zvatisingakwanisi. Anofadzwa nezvatinoedza kuita nomwoyo wose kuti timushumire. (VaKorose 3:23) Anoziva zvatisingakwanisi kuita. (Pisarema 103:14) Kana tikava nemwero, tichibvuma kuti kuti pane zvatisingakwanisi, tinogona kufara pakufamba naMwari. Wadii kudzidza kuti ungatanga sei kufamba naMwari? Achakupa makomborero akawanda kana ukafamba naye.—Zvirevo 10:22.
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna November:
Joeri 1-3–Mika 1-7